ईन्जिन भल्भ घण्टीको कारण के हो?
भल्भ आवाज के हो? गाडी सुरु भएपछि, ईन्जिनले धातु ढक्ढोर आवाजको समान लयबद्ध "क्लिक" बनाउँदछ, जुन इन्जिनको गति बृद्धि भई तालमा द्रुत हुन्छ। सामान्य अवस्थामा, ईन्जिनले लामो समयको लागि यस्तो प्रकारको हल्ला गर्दैन। अधिकजसो ...
भेरिएबल भल्भ समय प्रणालीको फाइदा के हो?
इञ्जिनको आगमनदेखि नै मानिसहरूले उसलाई सुधार गर्न रोकेका छैनन्, र हामीले नयाँ इन्जिनको पुस्ता पनि देख्यौं जुन ठूलादेखि सानासम्म विभिन्न विस्थापनहरू सहित रहेको छ। सवारी साधनको बृद्धिसँग हामीले भयानक उर्जा संकटको सामना गर्‍यौं। , तेल, एक गैर-नवीकरणीय स्रोत, बिस्तारै पूर्व छ ...
जब मोटरसाइकल लामो समयको लागि सवारी भईरहेको हुन्छ, इन्जिन भल्भ क्लीयरन्स सामान्यतया देखा पर्दछ, धेरै ठूलो वा धेरै सानो घटना, कारण पत्ता लगाउनको लागि, तपाईंलाई एक धेरै साधारण जानकारी दिन मोटरसाइकल भल्भ आपूर्तिकर्तासँग सल्लाह लिनु पर्छ। ईन्जिन लामा कमजोर भल्भ निकासीको प्रभाव ...
कसरी एक कार इञ्जिन भल्भ लाई ओवरहाल गर्ने?
मोटर वाहन पार्ट्स इञ्जिन भल्भ काम गर्ने वातावरण कठोर छ, ग्याससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, निकास भल्भको अधिकतम तापमान ℃०० डिग्री सम्म पुग्न सक्दछ, र स्नेहन चक्रको अन्त्यमा, भल्भ कामको साथ जोडी जब उद्घाटन र बन्द हुने कार्य लगातार हुन्छ, भल्भ पार्ट्स ज्यादै सहज छन् ...
मोटरसाइकल इञ्जिन भल्भ निकासी कसरी समायोजित गर्ने?
जब एक मोटरसाइकल लामो अवधि को लागी सवारी हुन्छ, इन्जिनमा सामान्यतया भाल्भ निकासी हुन्छ जुन कि धेरै ठूलो वा धेरै सानो, धेरै ठूलो वा धेरै सानो, धेरै ठूलो वा धेरै सानो छ। धेरै व्यक्तिहरू जो भल्भको बारेमा धेरै जान्दछन् उनीहरूलाई यी समस्याहरू के हुन सक्छ भन्ने बारे सचेत नहुन सक्छ, र जानकारी ...